उपकुलपति सहित पियु का ७ जना विरुद्द मुद्दा-NepalKanoon.com
उपकुलपति सहित पियु का ७ जना विरुद्द मुद्दा
जेठ १८, काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै आइतबार अख्तियारजे मुद्दा दर्ता गराएको हो।
आवेदन, सम्बन्धन साथै शुल्क बापत १ करोड ३२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र नयाँ सम्बन्धन बापत उठाउनुपर्ने २ करोड ९५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी ढंगले उठाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
मुद्दा पर्ने मा उपकुलपति डा. महेश्वरमान श्रेष्ठ,रजिष्ट्रार डा. निरोज पाण्डे,परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शुभनारायण पाठक, व्यवस्थापन संकायका डिन श्यामबहादुर कटुवाल, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका सहडिन राजेशकुमार झा, शिक्षा र कानून संकायका डिन शम्भुप्रसाद कोइराला, उनिहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (ङ), (छ), (ज) र (झ) बमोजिम हदै सम्मको सजाय माग गरिएको छ । उपकुलपतिदेखि डिनसम्मका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुको हकमा ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले दावी गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये शम्भुप्रसाद कोइराला बाहेक अरु सबै अख्तियारको हिरासतमा रहेका छन् । उनीहरुलाई अख्तियारले जेठ १३ गते मंगलबार पक्राउ गरेको मा कोइराला भने अझै फरार रहेको बताइएको छ ।